Su'aalo aan la aqbali karin oo ku saabsan teknolojiyada CAD / GIS - Gofumed
Su'aalo aan la aqbali karin oo ku saabsan teknolojiyada CAD / GIS
Abriil, 2009 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Leisure / waxyi
Waa inaad ka dambeysaa tirakoobka Google Analytics si aad u aragto su'aalo cajiib ah ama waqti ku qaadato Yahoo Jawaabaha si aan u lumin dareenka jilicsanaanta. Waxaan jeclaan lahaa in aan ka jawaabo mid kasta oo ka mid ah, laakiin xushmadnimadaydu waa khatar waana ka sii badan tahay haddii tani ay tahay barnaamij lagu soo hagaajiyey WordPress iyo Live Writer inta aan socdaalayo.
1 Sideen u ordayaa ArcGIS?
Rayos!, Waa la yaab leh, laakiin su'aashani waxay jirtaa waqtiyo 14 !!! Sidaas, si aanay u arag in aan ahay mid xun, halkan waa jawaabta jawaabta:
1.1 Guji badhanka "Start".
1.2 Guji "Barnaamijyada oo idil."
1.3 Riix "ArcGIS".
Ugu dambeyntii adoo gujinaya badhanka bidix ee "ArcMap".
Tallaabada waxaa lagu soo koobi karaa si loo rakibo ArcGIS kadibna akhri feyl loo yaqaan "readme_first.txt"
2 Sidee ayaan u arki karaa sawirrada nool ee Google Earth?
Sida khubarada badankood waxay yiraahdaan, waxaad ku riixdaa lakabka sawirka oo dooro ikhtiyaarka "fiiri wakhtiga dhabta ah ee NASA" sida ay u muuqato xiriirkan.
3 Barnaamijkee ayaa faa'iido badan leh, Linux ama AutoCAD?
Sidus wuxuu oran lahaa, hooyaday! Haddii aadan rumeynin, ka fiiri Yahoo Jawaabaha, ma dhigin isku xirka si aan i siiyo midabka 10 ee ka soo baxay sida qulqulaya sakhradda.
4 Maxay u dhowdahay AutoCAD?
Waxaan maleynayaa maxaa yeelay way furantay
5 Ma rakibi karaa AutoCAT mashiinka mashiinka 2 GB?
Haddii aad macnaheedu tahay Toyota-ga ... Uma maleynayo sidaas, haddii aad ka dhigan tahay AutoCAD, ama.
6 Miyuu qofku isticmaalay AutoCAD?
Haa, hubi haa.
7 Halkee laga soo dejisan karaa Keygen for AutoCAD 2009?
... oo bixi
8 Miyaa suurtogal ah in AutoCAD 12, 2004 iyo 2009 lagu rakibo mashiinka isku midka ah?
Haa, waxaan jeclaan lahaa inaan ka fekero waxa loo baahan yahay.
9 Halkee baan ka heli karaa macluumaadka ku saabsan Baaskiilada Yar ee GIS?
Jawaabta koowaad ee Google
10 Sideen u qorsheyn karaa isticmaalka Qorshaha B?
Ummm, ma waxaad ka dhigan tahay kaniiniga loo yaqaan "Maalinta labaad"? Taasi waa inaad la tashataa takhtar.
Waan ka xumahay haddii aan dareemo miyirigayga maanta aan sax ahayn.
Waxaan soo laabanayaa Sabtida.
Post Previous«Previous Habka karti-xirfadeedka ayaa lagu dabaqay Catastro
Post Next Isku xir Manifold leh Khariidadda FuranNext »
4 Jawaab "Su'aalo yaab leh oo ku saabsan teknolojiyada CAD / GIS"
Ilaa hadda sida aan ogaado, ma jiraan siyaabo badan, haddii aadan iibsanin liisanka codsiyada furan
Haddii cidda aad siinaysid uusan wax badan ka aqoon AutoCAD, waxaad ka dhigi kartaa dhammaan waxyaabaha ku jira xannibaado, ka dibna ku dheji sida laba saf, laba tiir oo leh masaafada 0. Tan ayaa ka dhigaysa wax aan suurta gal ahayn in la taabto shaygaas, sidaa darteedna ha uga faa'iideysan. Laakiin dib ayaad u gelikartaa oo nabadgelyada oo dhan ayaa halkaas gaadhay.
Hase yeeshe, trick waxay noqon kartaa in la abuuro qaybo ka mid ah lakabyo kala duwan ama goobo ka mid ah sawirada, oo leh iskudhafo gelisyo duwan
Fursad kale ayaa laga yaabaa inay ahaato mid deggan, inkastoo aadan arki karin AutoCAD
Edgar isagu wuxuu leeyahay:
Hello su'aalahaygu waa tan:
Sidee baan u samayn karaa si waxyaabaha khariidadda 'autocad' aan loo beddeli karin, marka laga reebo saarista boodhadhka lakabyada ama aan horjoogsanno, fikradda ayaa ah in la diri karo oo aan wax laga beddeli karin iyo in ayan ahayn PDF.
Waan kaaga mahadcelinayaa dareenkaaga, maalin wanaagsan.
Waxaa jira codsi la yiraahdo shp2epa, kaas oo kuu ogolaanaya inaad dhoofiso faylasha qaabka Epanet
Hal su'aal, waxaan rajeynayaa inaadan ka tagin golaha, laakiin waxaan raadinayay hab aan feylalado ka soo saaro ArcGIS ilaa EPANET. Waxaan ku faraxsanahay in aad i caawisid ...